Nwamba Gluttony bụ ihe ọkpụkpọ maka ndị na-akwụsị ịingụ nri | Gam akporosis
Site na ọrịa a na-efe efe anyị niile enwetawo ụfọdụ ibu na Ma eleghị anya, Wolverine Cats abụghị ihe kacha mma maka ugbu a, ma ọ bụ egwuregwu dị oke egwu, nke na-acha pinki pinki ma maa mma, nke na mmadụ enweghị ike iguzogide ịdaba na aka ya iji nwee ọlicụ na ndị na-pịa na nke anyị ga-eji igwe na-agba na ihuenyo anyị eme ihe.
Un Egwuregwu dị n'asụsụ Spanish na nke anyị ga-eri ụdị nri ọ bụla na onye na-eri nri ga-eri nri n'akụkọ a ga-etinye ya n'ọnụ; na site n'ụzọ anyị ga-akpọghe Fans nke ga-enyere anyị aka inwe ọganihu ngwa ngwa. Anyị ga-eme ya na clicker nke nwere ọdịnaya zuru ezu iji kpochie anyị ruo izu.
1 Oke nwamba kacha eri nri na akụkọ ihe mere eme
2 Mee ka ọnụ ọgụgụ ndị Fans na-eri Gluttonous Cats
3 A nnọọ pink na mara mma freemium
Oke nwamba kacha eri nri na akụkọ ihe mere eme
Dị ka anyị kwuru, Ọ bụrụ na ị nọ na nri, ị gafere karịa, ebe ọ bụ na ịhụ oke nwamba na-eri nri na-aza ụdị nri ọ bụla, eziokwu bụ na ọ naghị enyere anyị aka ịchọrọ ịla friji ka anyị nwee nri; ya mere eleghị anya ị na-ahọrọ egwuregwu egwuregwu ndị ọzọ a nwamba nwere ihe mgbaru ọsọ ndị ọzọ dị ka ịmepụta ụwa ha.
A clicker na nke mbụ anyị kwesịrị ịpị ihuenyo ka nwamba anyị na-eri nri na-eri nri ma nweta ego zuru oke iji nwekwuo ogo. Oge ọ bụla anyị ga - abanye ọgụ na - alụ ọgụ megide pusi ọzọ nke na - etokwa iji rie nke ya nke ga - enyere anyị aka iritekwu ego na obere oge.
Dị ka ezigbo clicker, ọ dịghị ihe dị ọhụrụ na arụzi, n'ihi ya, anyị ga-enweta ndị ọzọ larịị na ndị na-akwado kittens ga-akpaghị aka n'ịwa gold mkpụrụ ego na-atụgharị ha ka ukwuu ọganihu.
Mee ka ọnụ ọgụgụ ndị Fans na-eri Gluttonous Cats
Ewezuga ya mụbaa ọnụ ọgụgụ ndị Fans Iji nwee ọganihu ọbụlagodi mgbe anyị anaghị egwu egwu, Gluttony Cats na-enyekwa anyị ohere ị kpọghee ngwa ngwa nke, ma e wezụga ịbụ oké osimiri nke ndị na-eri nri na kittens anyị, na-enyekwa ụfọdụ uru dị ka iwebata ọtụtụ nri na aka ọ bụla. ma ọ bụ usoro ndị ọzọ nke uru anyị ga-enweta.
Anyị ga-enwe ọbụna ohere nke ịzụlite ubi nke aka anyị ma si otú a na-eme ka nri nke Nwamba ndị a na-eri nri nwere ọtụtụ ihe dọtara. Kedu site n'ụzọ agaghị abụ achicha dị mfe dịka ọ na-eme na mbido, mana anyị ga-agagharị na hamburgers na nri ndị ọzọ dị ụtọ.
Eziokwu bụ na n'ụdị ọdịnaya ọ nwere ọtụtụ ụdị na anyị nwere obere oge iji nwalee otu ihe na onye ọzọ ịhụ mmetụta ma si otú a na-enwe ọganihu ngwa ngwa o kwere mee.
A nnọọ pink na mara mma freemium
Anyị na-eche ihu freemium, ya mere mgbasa ozi ga-enyekwa anyị ohere irite ụfọdụ uru metụtara na akpaka na ya mere anyị nwere ike ikwe ka onwe anyị ezumike ka anyị wee ghara iru na ihuenyo ngwa ngwa.
Banyere teknuzu na nke anya ọ bụ ihe zuru oke nke ịpị mara mmaMmetụta ụda dị mma yana visuals na ọ dị n'asụsụ Spanish ka anyị wee nwee ike ịbanye n'ụwa nke nwamba ndị na-eri nri na-enwe anyaụfụ n'ihe niile ha na-eri.
Nwamba Wolverine bụ egwuregwu freemium n'efu nke ị nwere site na gam akporo nakwa ka anyị kwado ka ị gafere ma ọ bụrụ na ị nọ na nri. Ọ bụkwa na ịhụ nwa nwamba ahụ n'amaghị ama tinye ọtụtụ nri n'ọnụ ya bụ ihe na-akpali uche anyị nke nwere ike ime ka anyị na-aga ngwa nju oyi karịa oge iji rie nri. Ọ dabere na gị.
Ọ bụrụ na ịnọghị na nri gị bụ egwuregwu na-atọ ụtọ. Ọzọ ihe bụ na ọ na-efu gị ifelata na ị na-ahụ nwamba ndị a bloat nke ukwuu iri ihe niile.
Nko site na nke mbụ
Egwuregwu nwere ọmarịcha mma maka ịpị
Di iche iche nke ọdịnaya, ngwa na kittens ka ị kpọghee
Ọ bụrụ na ị nọ na nri, ị ga-enwe nsogbu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Gluttony Cats clicker bụ ihe nkịtị ị na-anaghị akwụsị iri nri